Myanmar junta’s environment minister is hit with tough new sanctions by the US Treasury - EIA
A key figure in the Myanmar military coup and the country’s natural resources sector has been slapped with sanctions by the US Government.
The US Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) yesterday (17 May) placed Khin Maung Yi, the Minister for Myanmar’s Ministry of Natural Resources, Environment and Conservation (MONREC), on its Special Designated National (SDN) list.
This means Khin Maung Yi’s assets will be blocked and US persons prohibited from dealing with him.
Khin Maung Yi, via myanmarforestcertification.org
It also gives OFAC the power to investigate his activities and connections, including any companies engaged in business with him and the State-run Myanmar Timber Enterprise (MTE), which has also been sanctioned by the US.
EIA has been highlighting crime in Myanmar’s forest sector for more thanadecade, sharing intelligence with relevant international enforcement agencies; last month, we published an online resource highlighting how the military continues to profit from exports of timber, particularly teak in high demand for the luxury yachting sector.
As Minister for Myanmar’s natural resources, Khin Maung Yi has directly profited from the selling of the country’s natural resources and continues to do so.
“These people are like ghosts,” said Faith Doherty, EIA’s Forests Campaigns Leader. “Khin Maung Yi’s role in combat and military history is almost impossible to confirm, but we are aware of past abuses that have taken place.
“Putting him on the sanctions list is one way of making sure he is no longer invisible and another warning to those who wish to profit on the back of the suffering of Myanmar’s people under the military coup – when you’re buying illicit Myanmar teak and other hardwoods for your high-end, high-paying clients, you’re working with criminals and supportingaregime which is now responsible for more 800 deaths, including children.”
Khin Maung Yi’s role in managing the MTE – controlling the Forest Product Joint Venture Corporation and having access to international markets – will now be difficult, especially when dealing in US dollars.
One of the main drivers of deforestation in the country is the logging and sale of Myanmar’s teak to the international market, usually traded in US dollars.
Khin Maung Yi has been active in military service since 1986, when he joined the Army officer training school, until 2003 when he becamea“special officer” in the Forestry department, eventually leading the MTE until 2013 when he was promoted to permanent secretary of MONREC.
He was appointed as Minister of Natural Resources, Environment and Conservation at the time of the coup on 1 February this year.
“Profits from the country’s timber industry do not see the light of day – they go into enrichingafew, including Khin Maung Yi,” added Doherty. “We’re delighted to see this action being taken and strongly urge others to follow the US lead.”
The US Department of the Treasury’s OFAC administers and enforces economic and trade sanctions based on US foreign policy and national security goals against targeted foreign countries and regimes, terrorists, international narcotics traffickers, those engaged in activities related to the proliferation of weapons of mass destruction and other threats to the national security, foreign policy or economy of the US.
မြန်မာစစ်အစိုးရ၏ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဝန်ကြီးကို အမေရိကန်က ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့
မြန်မာနိုင်ငံကို စစ်အာဏာသိမ်းမှုအတွင်း စစ်ဘက်မှ အရေးပါသူ တဦးနှင့်တကွ မြန်မာနိုင်ငံ၏ သဘာဝအရင်းအမြစ်ကဏ္ဍတို့အား အမေရိကန်အစိုးရက စီးပွားရေးဒဏ်ခတ် ပိတ်ဆို့လိုက်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။
မေလ ၁၇ ရက်နေ့တွင် အမေရိကန် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ နိုင်ငံခြားသားပိုင် ပိုင်ဆိုင်မှုများ ထိန်းချုပ်ရေးဌာနက မြန်မာနိုင်ငံ သယံဇာတနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီး ဦးခင်မောင်ရီကို စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့ခံ လူပုဂ္ဂိုလ် အထူးစာရင်းအတွင်း ထည့်သွင်းလိုက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
အခုလို ထည့်သွင်းခံရမှုကြောင့် ဦးခင်မောင်ရီသည် သူ၏ ပြည်ပရောက် ပိုင်ဆိုင်မှုများကို သုံးခွင့်မရတော့ပဲ အမေရိကန်နိုင်ငံသားများကလည်း သူနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ခွင့် ရှိမည် မဟုတ်တော့ချေ။
ထို့အပြင် ဦးခင်မောင်ရီနှင့်တကွ အမေရိကန်က စီးပွားရေးပိတ်ဆို့ထားပြီးဖြစ်သော မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်းနှင့် ချိတ်ဆက် လုပ်ကိုင်သော ကုမ္ပဏီတိုင်း၏ လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုများ အပါအဝင် ဦးခင်မောင်ရီ၏ စီးပွားရေး လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုများနှင့် အချိတ်အဆက်များကို နိုင်ငံခြားသားပိုင် ပိုင်ဆိုင်မှုများ ထိန်းချုပ်ရေးဌာနက စုံစမ်းစစ်ဆေးနိုင်သည့် အခွင့်အာဏာ ရှိသွားမည် ဖြစ်သည်။
EIA သည် မြန်မာ့သစ်တောကဏ္ဍအတွင်း ဖြစ်ပွားနေသော ရာဇဝတ်မှုများကို မီးမောင်းထိုးပြနေသည်မှာ ဆယ်စုနှစ်တခု ကျော်လာပြီဖြစ်ပြီး စစ်ဆေး တွေ့ရှိရသော သတင်းအချက်အလက်များကို သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာ ဥပဒေစိုးမိုးရေး အဖွဲ့အစည်းများကိုလည်း ဝေငှနေရာတွင် မြန်မာစစ်တပ်သည် ဇိမ်ခံရွက်လှေ ဆောက်လုပ်ရာတွင် ဝယ်လိုအားများနေသည့် သစ်၊ အထူးသဖြင့် ကျွန်းသစ် တင်ပို့ခြင်းဖြင့် ဆက်လက် အမြတ်ထုတ်နေဆဲ ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း အွန်လိုင်းတွင် အသေးစိတ် သတင်းအရင်းအမြစ်တခု ထုတ်ဖော် တင်ပြပေးခဲ့ပါသည်။
ဦးခင်မောင်ရီသည်လည်း မြန်မာ့သယံဇာတဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဖြစ်သည်နှင့်အညီ မြန်မာ့သယံဇာတများ ရောင်းချခြင်းတွင် တိုက်ရိုက်အမြတ်ရနေဆဲ ဖြစ်ပါသည်။
EIA ၏ သစ်တောရေးရာ လှုပ်ရှားမှု ခေါင်းဆောင် ဖိတ်သ် ဒိုဟာတီကလည်း “ဦးခင်မောင်ရီလို လူတွေက သရဲတစ္တေတွေလိုပဲ အမိအရ ဖမ်းရခက်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ တိုက်ခိုက်မှုတွေမှာ ပါဝင်မှုနဲ့ စစ်မှုထမ်းရာဇဝင်က အတည်ပြုဖို့ မဖြစ်နိုင်လောက်အောင် ခက်ခဲတယ် ဆိုပေမယ့် အရင်တုန်းက သူ့ရဲ့ ကျူးလွန်မှုတွေကိုတော့ ကျွန်မတို့ သိထားပါတယ်” လို့ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
“အခုလို ဦးခင်မောင်ရီကို စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့ခံရသူ စာရင်းထဲ ထည့်လိုက်နိုင်ခြင်းဟာ သူအရင်လို မထင်မရှား ကျူးလွန်မှုတွေ လုပ်မနေနိုင်အောင် တားတဲ့ နည်းလမ်းတခုလည်း ဖြစ်တဲ့အပြင် စစ်အာဏာသိမ်းမှုဒဏ်ခံရတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကို မငဲ့ကွက်ပဲ အကျိုးအမြတ်ရှာချင်သူတွေကို သတိပေးလိုက်သလိုလည်း ဖြစ်သွားပါတယ်။ တရားမဝင်တဲ့ မြန်မာ့ကျွန်းနဲ့တကွ အခြားသစ်မာတွေကို ကြေးကြီးပေးသူတွေကို ရောင်းဖို့ လိုက်ဝယ်တာဟာ ရာဇဝတ်ကောင်တွေနဲ့ စီးပွားရေးလုပ်တာဖြစ်ပြီး ကလေးသူငယ်တွေအပါအဝင် လူပေါင်း ၈၀ဝ ကျော် သေဆုံးမှုမှာ တာဝန်ရှိတဲ့ အစိုးရတရပ်ကို ထောက်ပံ့တဲ့သဘောလည်း သက်ရောက်ပါတယ်။”
ဦးခင်မောင်ရီ၏ မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်းတွင် တာဝန်ယူသော အခန်းကဏ္ဍဖြစ်သည့် သစ်တောထွက်ပစ္စည်း ဖက်စပ် ကော်ပိုရေးရှင်းကို အုပ်ချုပ်ခြင်းနှင့်တကွ နိုင်ငံတကာဈေးကွက်ကို ချိတ်ဆက်ခြင်းတို့သည် ယခု ပိတ်ဆို့ခံရပြီးနောက် အထူးသဖြင့် အမေရိကန်ဒေါ်လာဖြင့် အရောင်းအဝယ်လုပ်ဖို့ ခက်ခဲသွားမည် ဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် သစ်တောပြုန်းတီးစေသော အဓိကတွန်းအားများမှ တခုသည် ကျွန်းသစ်များ ခုတ်ထွင် ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် နိုင်ငံတကာဈေးကွက်တွင် များသောအားဖြင့် အမေရိကန်ဒေါ်လာဖြင့် ရောင်းချခြင်း ဖြစ်သည်။
ဦးခင်မောင်ရီသည် ၁၉၈၆ တွင် ဗိုလ်သင်တန်းကျောင်း တက်ရောက်ပြီးသည်မှ စပြီး ၂၀ဝ၃ ခုနှစ်၌ သစ်တောဦးစီးဌာနတွင် အထူးအရာရှိ ဖြစ်လာသည့် ကာလအထိ စစ်မှုထမ်းခဲ့သူ ဖြစ်ပြီး အရပ်သား အရာရှိဘဝတွင် မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်းကို ဦးဆောင်သူအဆင့်အထိ ရောက်လာခဲ့ကာ ၂၀၁၃ ခုနှစ် အရောက်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးဌာန အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်အဖြစ် ရာထူးတိုးပေးခံခဲ့ရသည်။
လက်ရှိ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့ စစ်အာဏာသိမ်းမှု ဖြစ်ပွားပြီးချိန်တွင်မူ မြန်မာနိုင်ငံ သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးအဖြစ် ခန့်အပ်ခြင်း ခံခဲ့ရသည်။
“မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ သစ်တောလုပ်ငန်းက ရရှိတဲ့ အကျိုးအမြတ်တွေ အမှောင်ချ ဖုံးကွယ်ခံထားရပြီး ဒီအမြတ်တွေက ဦးခင်မောင်ရီ အပါအဝင် လူနည်းစုအတွက်ပဲ အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေနေပါတယ်။ အခုလို သူ့ကို စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့ ဒဏ်ခတ်နိုင်လိုက်တဲ့အတွက် ကျွန်မတို့ အားရကျေနပ်ရပြီး တခြားနိုင်ငံတွေ အနေနဲ့လည်း အမေရိကန်အစိုးရလုပ်လိုက်သလိုမျိုး ဒဏ်ခတ်မှုတွေလုပ်ဖို့ အားတက်သရော တိုက်တွန်းလိုပါတယ်” လို့ ဖိတ်သ် ဒိုဟာတီက ဆက်လက် ဖြည့်စွက် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
အမေရိကန် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ နိုင်ငံခြားသားပိုင် ပိုင်ဆိုင်မှုများ ထိန်းချုပ်ရေးဌာနသည် အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒနှင့်တကွ အမေရိကန်နိုင်ငံတော် လုံခြုံရေး ရည်မှန်းချက်များက ပစ်မှတ်ထားသော တိုင်းပြည်နှင့်အစိုးရများ၊ အကြမ်းဖက်သမားများ၊ နိုင်ငံတကာ မူးယစ်ဆေးဝါး ကုန်သွယ်သူများ၊ အကြီးအကျယ်ဖျက်စီးနိုင်စွမ်းရှိသော လက်နက်များ ပျံ့နှံ့မှုနှင့် သက်ဆိုင်သော လှုပ်ရှားမှုများတွင် ပါဝင်သူများ၊ အမေရိကန်နိုင်ငံတော် လုံခြုံရေး၊ နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒ သို့မဟုတ် စီးပွားရေးကို ခြိမ်းခြောက်ခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်သော လှုပ်ရှားမှုများတွင် ပါဝင်သူများကို စီးပွားရေးနှင့် ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ ဒဏ်ခတ်ရာတွင် ကြီးကြပ် အာဏာတည်စေသည့် တာဝန်ယူထားသော ဌာန ဖြစ်ပါသည်။
Myanmar under the junta – why do sanctions matter and why are EU & UK dragging their feet?
Forest Product Joint Venture Corporation